Ukuzibophelela Emtshatweni | Ukunceda Iintsapho
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKikaonde IsiKikongo IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Xa wawutshata, wenza isifungo. Eso yayisisifungo sokuba nakwahlulwa kukufa, ibe wawuzimisele ukuba uya kunamathela kwiqabane lakho noba sekumnyam’ entla.
Kodwa ukutyhubel’ iminyaka umtshato wenu uye wantlithwa ziingxaki ezininzi. Ngaba usaziva ubophelelekile kwiqabane lakho?
Wena kujonge ukuzibophelela njengesigqibo sobulumko esiya kuwomeleza umtshato wakho
Ukuzibophelela kusisicombululo, kungekhona ingxaki. Abantu abaninzi namhlanje bayoyika ukuzibophelela. Abanye bathi ukuzibophelela sesona sigqibo sobuyatha unokusenza. Kodwa wena kujonge njengeankile yokuqinisa umtshato wakho. Umfazi ekuthiwa nguMegan uthi, “Xa nixabana, enye yezinto ezimnandi ngokuzibophelela kukwazi ukuba nobabini aniyi ndawo.” * Enoba kunokubakho iingxaki ezingakanani emtshatweni wenu, ukwazi ukuba nobabini nizibophelele kuwo kukodwa nje, kunokuninika amandla okulwa nazo.—Funda ibhokisi ethi “ Ukuzibophelela Nokunyaniseka.”
Lilonke: Ukuba uneengxaki emtshatweni wakho, eli lixesha lokuba uzibophelele ngakumbi kunokucinga ngokugqotsa. Ungakwenza njani oko?
Hlola indlela owujonga ngayo umtshato. “Lo mtshato uya kwahlulwa kukufa.” Ngaba loo mazwi akwenza uzive usekoneni, okanye akwenza uzive ukhuselekile? Xa kuvela iingxaki, ngaba into yokuqala ethi qatha engqondweni kukulishiya iqabane lakho? Ukuze uzibophelele ngokungagungqiyo emtshatweni wakho, kuhle ukuba uwujonge njengento kanaphakade.—Umgaqo weBhayibhile: Mateyu 19:6.
Hlola imvelaphi yakho. Izinto ezenziwa ngabazali bakho zinokuba nefuthe kwindlela okujonga ngayo ukuzibophelela. Umfazi ekuthiwa nguLea uthi, “Abazali bam baqhawula umtshato ndisemncinci, ibe loo nto iye yandenza andakubona njengento ebaluleke kangako ukuzibophelela.” Qiniseka ukuba unako ukuwuqinisa umtshato wakho. Akunyanzelekanga ukuba uphinde iimpazamo zabazali bakho!—Umgaqo weBhayibhile: Galati 6:4, 5.
Hlola amazwi akho. Xa uxabana neqabane lakho, kulumkele ukuthetha into oya kuzisola ngayo kamva, njengokuthi “Ndiyakushiya!” okanye uthi, “Ndiza kufun’ omnye umntu ondixabisileyo!” Loo mazwi awawuqinisi umtshato, ibe endaweni yokuba acombulule ingxaki, ayenza iqatsele ngakumbi ingxabano yenu. Endaweni yokusebenzisa amazwi ahlabayo, usenokuthi: “Kucacile ukuba sobabini sinomsindo. Singenza njani ukuze siyilungise le ngxaki?”—Umgaqo weBhayibhile: IMizekeliso 12:18.
Yenza kucace ukuba uzibophelele. Beka ifoto yeqabane lakho kwidesika osebenzela kuyo. Thetha kakuhle ngomtshato wakho kwabanye. Qiniseka ukuba uyalifowunela iqabane lakho yonke imihla xa ungekho. Xa uncokola sebenzisa amagama athi “thina”, “mna nomkam” okanye “mna nomyeni wam.” Ngokwenza ezi zinto, uqinisekisa wena siqu kunye nabanye ukuba uzibophelele kwiqabane lakho.
Khangela abantu onokufunda kubo. Funda kubantu abaye bakwazi ukujamelana neengxaki zomtshato. Babuze: “Nikujonga njani ukuzibophelela, ibe kuye kwaninceda njani oko?” IBhayibhile ithi: “Intsimbi, ilolwa ngentsimbi. Ngoko umntu ulola ubuso bomnye.” (IMizekeliso 27:17) Unaloo mazwi engqondweni, kutheni ungazami ukufunda kumacebiso abo banemitshato ephumelelayo?
^ isiqe. 7 IBhayibhile iyamvumela umntu ukuba awuqhawule umtshato xa iqabane lakhe liye laziphatha kakubi ngokwesondo. Funda inqaku elithi “Okufundiswa YiBhayibhile—Ukukrexeza” kwakulo Vukani!
“Oko uThixo akubophelele ngedyokhwe ndawonye makungahlukaniswa mntu.”—Mateyu 19:6.
“Kuba ngamnye uya kuthwala owakhe umthwalo.”—Galati 6:5.
“Kukho othetha engacinganga njengokuhlaba kwekrele, kodwa ulwimi lwezilumko luyaphilisa.”—IMizekeliso 12:18.
“Ukuba wena neqabane lakho ninyanisekile omnye komnye, umtshato wenu uya kunqabiseka. Xa nicinga ngeenyanga, iminyaka namashumi eminyaka ezayo, nizibona nikunye. Ayithi qatha nokuthi qatha into yokuba niya kuze nahlukane, yaye oku kwenza umtshato wenu unqabiseke. Enye inkosikazi ithi: ‘Enoba sele endicaphukise kangakanani na [umyeni wam] eyona nto indicaphukisayo koko kwenzekayo, andinaxhala ngokuba umtshato wethu uza kuqhawuka. Ndicinga nje ngendlela esiza kuyilungisa ngayo loo ngxaki. Andithandabuzi nakancinane ukuba izinto ziza kulunga—ingxaki nje kukuba andiyiboni indlela yokuyilungisa ngaloo mzuzu.’”—Ithatyathwe kwiMboniselo kaSeptemba 15, 2003.